ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: May 2010
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ဟိုလီဟက်ဒ် ဆိပ်ကမ်း မှတာဝန်ရှိသူများဟာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒပ်ဗလင်မြို့ မှ ဆိုက်ရောက်
လာသည့် ကူးတို့ သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်တွင် ပါရှိလာသည့် အမျိူးသမီးတစ်ဦး၊ သူမ၏ဘရာစီယာ ထဲတွင်
သိုဝှက်ယူဆောင်လာသည့် ယူရို ၂၆၀၀၀ ကိုဖမ်းဆီးသိမ်းယူလိုက်ခဲ့ ပါတယ်...
၇ိုမေနီးယားနိုင်ငံသူ အဆိုပါအမျိူးသမီးကတော့ ထိုငွေများဟာအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာ သူမရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်
ငန်းအရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုက ရတဲ့ ငွေတွေဖြစ်ပါတယ် လို့ ဗြိတိန်နယ်ခြားစောင့် တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းများ
ထိုငွေများဟာ ယူရို ၅၀၀ တန်ငွေစက္ကူများဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကြားမှာ သိုဝှက်ထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..
" ထိုပိုက်ဆံများဟာ ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သံသယရှိယင် ဒီငွေတွေကို ဖမ်း
ဆီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခွင့် ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိပါတယ်..." လို့ နယ်ခြားအဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်...
Agnlesey မှာရှိတဲ့ သင်္ဘောဆိပ်ကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်...
Helpful graphic from here.
အဆိုပါနယ်ခြားအဖွဲ့ ရဲ့ အဆိုအရ အမျိူးသမီးဟာ ထိုငွေတွေကို စီးပွားရေးအရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စက ရရှိ
တယ်ဆိုတာကို သက်သေမပြနိုင်တဲ့ အပြင် သူမအနေနှင့် အဘယ်ကြောင့် အတွင်းခံဘရာစီယာထဲမှာ
ထိုမျှများပြားလှသောငွေကြေးများ အဘယ်ကြောင့် ထည့် သွင်းသယ်ဆောင်လာရသလဲဆိုတာကိုလည်း
ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့ ဘူးလို့ သိရပါတယ်...
ပေါင်စတာလင် ၂၂၆၀၀ နှင့် ညီမျှသည့် အဆိုပါငွေများကို သူမအနေနှင့် တရားဝင်ခိုင်လုံသည့် သက်
သေအထောက်အထား ပြသနိုင်မှသာ ပြန်လည်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ယခုလ အစောပိုင်းကပင် စနစ်တစ်ကျဖွဲ့ စည်းကျူးလွန်သောပြစ်မှုများနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ အထူးအဖွဲ့ က
ယူရို ၅၀၀ တန်ငွေစက္ကူများကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဆက်လက်ဖြန့် ချီတော့ မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကြေငြာခဲ့ 
၉၀ ရာခိုင်နှုံးမျှသော ယူရို ၅၀၀ တန်သုံးစွဲမှုများဟာ တရားမ၀င် ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် သာဆက်စပ် နေသည့် အထောက်အထားများတွေ့ ရှိရပြီးနောက် ယခုလိုကြေငြာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ငွေစက္ကူများ ယခုကဲ့သိုဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းခြင်းဟာ ဒုစ၇ိုက်မှုခင်းများဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆက်
လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဥပဒေအရဖြစ်ပြီး၊ ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သောငွေကြေးများကို ဒုစရိုက်
ဥပဒေအရ တရားဝင်အပြစ်ချမှတ်ခြင်းမပြုခင် ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနိုင်သည် ဟုပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
Posted by Unknown | at 5:36 AM |2comments
Dutiful daughter tops class
မိဘကျေးဇူး အထူးသိတတ်၊ သမီးမြတ်...
တရုတ်နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ ကိုယ်တစ်ခြမ်းလေဖြတ်နေသည့် သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို
အချိန်ပြည့် ကြည့် ရှုစောင့် ရှောက်နိုင်ဖို့ သူမနှင့် အတူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုခေါ်သွားလေ့ ရှိပါတယ်...
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ရွှီဒါဟွေး ဟာ ၀ူဟန်းဇီဝအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်မှာ စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်အင်
ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်တွေကို တက်ရောက်သင်ယူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ချန်ကျန်းနေ့ စဉ်သတင်းစာက
နေ့ စဉ်သူမရဲ့ ဖခင်ကိုဂရုစိုက်ပြုစုရ၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်ပိုင်းအလုပ်လည်းလုပ်ရသည့် 
ကြားထဲကပင် ကျောင်းစာကိုပါလေ့ လာခဲ့ ရတာဖြစ်ပေမယ့် ထူးဆန်းအံ့ သြစရာကောင်းစွာ သူမဟာအ
" ကျွန်မအတွက်တော့ ဘ၀ခရီးဟာ ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ မထင်မိပါဘူး...မိသားစုမှာ တစ်ဥိးတည်းသော
သားသမီးဖြစ်လို့ ကျွန်မသာ အိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ ယင် ဘယ်သူမှ အဖေ့ ကိုပြုစုမယ့် သူမရှိပါဘူး..."
သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ရွှီချန်ရူ ဟာဦးနှောက်ထဲသွေးယိုပြီး ၎င်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုယ်
တစ်ခြမ်းလေဖြတ်နေခဲ့ တာ ယခုနှစ်အဆန်းပိုင်းကတည်းကဖြစ်ပါတယ်...
သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းတာမို့ သူမကိုယ်သူမပင်အနိုင်နိုင် ပြန်လည်ဂရုစိုက်
နေရတာမို့ မိန်းကလေးဟာ သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို သူမနှင့် အတူတက္ကသိုလ်သို့ အတူခေါ်ဆောင်သွားဖို့ 
သူမရဲ့ ဖြစ်အင်ကိုစာနာ နားလည်ခဲ့ တဲ့ တက္ကသိုလ်က အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲ သူမတို့ အတွက်နေစ
ရာအဆောင်ကမ်းလှမ်းထောက်ပံ့ ခဲ့ ပါတယ်...
သူမဟာ နေ့ လည်ထမင်းစားနားချိန်တွေမှာ စားသောက်ခန်းမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး နေ့ လည်ကျောင်းဆင်း
ပြီးတာနဲ့ သုံးနာရီလောက် ရေသန့် ဗူးများနှင့် ဖုံးကဒ်များ ရောင်းရပါတယ်..
သူမဟာ နေ့ စဉ် နံနက် ၅ နာရီမှာအိပ်ယာကထရပြီး စားသောက်ဖို့ ဝယ်ခြမ်းရပါတယ်...ပြီးတာနဲ့ သူမရဲ့ 
ဖခင်နှင့် အတူ ကျောင်းကိုရောက်ဖို့ တစ်နာရီလောက်ကြာအောင်သွားရပါတယ်...
ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ သူမဟာ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတာနှင့် ဖခင်ကို မိနစ်သုံးဆယ်လောက်ကြာ
အောင် နှိပ်နယ်ပေးပြီး အိပ်ပျော်စေရပါတယ်...
မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်းဖတ်ရတာ ကြည်နူးရသလို့ သူမရဲ့ ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးပဲ
ခေတ်ပေါ်အသုံးအဆောင် ( အ၀တ်အစား၊ မိုဘိုင်း စတာတွေ ) နှင့် အပျော်အပါးကို စိတ်ထဲမှာမထားပဲ
လောကဓံကိုကြံ့ ကြံ့ ခံနိုင်တဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ယနေ့ လူငယ်တွေ အတုယူနိုင်ကြပါစေ...
ဘ၀မှာ အဲဒီ အသုံးအဆောင်တွေမရှိလည်း ဘာမှမဖြစ်သွားဖူးဆိုတာ သိသူအဖို့ ကတော့ စိတ်ထဲမှာ
လိုချင်မှုတွေ နည်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ...
A Chinese woman has taken her partially paralysed father to university with her so she can look after him and study at the same time.
Xu Dahui, 22, is studying mechanical and electrical engineering at Wuhan Bioengineering Institute, reports Changjiang Daily.
Amazingly, she is top of her class - despite the demands of studying, caring for her father and working part-time to make ends meet.
"I don't think the life is harsh to me. I am the only child in the family. If I quit, who would take care of him?" she asked.
Xu's father, Xu Changru, 68, suffered an acute cerebral haemorrhage, which paralysed the left side of his body, earlier this year.
She decided to take him to university with her as her mother is also unwell, and can barely look after herself.
The university, touched by her story, offered the pairarent-free university apartment.
Xu works in the canteen during her lunchbreak and sells bottled water and telephone cards for three hours after her afternoon lectures.
She gets up at 5am each day to shop for food, then gets her father up and the pair make their way to class -ajourney which takes them an hour.
After going back home in the evening, she cooksameal and then gives her fathera30-minute massage to help him sleep. Only then, can she begin her own home study time.
Posted by Unknown | at 12:23 AM |5comments
ရုရှားက စည်းကမ်းပြည့် ဝသည့် ဒီမိုကရေစီ....
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ မကြာခဏပြက်ရယ်ပြုခံရလေ့ ရှိတဲ့ ( အမှန်တစ်ကယ်အာဏာမရှိပဲ လက်ညှိုးထောင်ခေါင်း
ငြိမ့် လုပ်တဲ့ ၊ ရုပ်သေး ) လွှတ်တော်ဟာ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်အမတ်မင်းတွေ လွှတ်တော်အတွင်း
ဆွေးနွေးမဲပေးတဲ့ အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ မတက်ရောက်ပဲပျက်ကွက်သည့် အမတ်များအတွက်တစ်နေရာ
မှတစ်နေရာသို့ အပြေးအလွှားသွားကာ မဲခလုတ်တွေကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်စားမဲပေးနေကြသည်ကိုရိုက်ကူးထား
သည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခု လွန်ခဲ့ တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ တဲ့ အတွက် ကျော်မကောင်းကြားမ
ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ထပ်မံတိုးပွားလာခဲ့ ရပါတယ်...
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဟာ ( ရုရှားအစိုးရ ) ကရင်မလင် ကတင်သွင်းတဲ့ ဥပဒေများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်
သမျှကိုကန့် ကွက်ဆန့် ကျင်ခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း ထောက်ခံအတည်ပြု၊ တံဆပ်တုံးနှိပ်
ပေးနေခဲ့ ရတဲ့State Duma လို့ ခေါ်တဲ့ ရုရှားအောက်လွှတ်တော်အတွက် နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ 
အ၇က်သေစာသုံးစွဲပြီး ယာဉ်မောင်းနှင်မှု ထိန်းချူပ်အပြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအသစ်တစ်ခုကို ရုရှား
အောက်လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ စဉ် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှာပဲ အမှန်တစ်ကယ်တက်
ရောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ၈၈ ယောက်သာရှိသည့် ထိုနေ့ အစည်းအဝေးက ထောက်ခံမဲ ၄၄၀ ကျော်
ဖြင့် အတည်ပြုပေးခဲ့ ပါတယ်...( ဗော်ဒဂါ တန်ခိုးနဲ့၅ ဆ တိုးလိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့ ....)
ထိုကဲ့ သို့ ထောက်ခံမဲ အပြတ်အသတ်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းကတော့ ရိုးရှင်းလှပါတယ်...
တက်ရောက်လာတဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်သူအများစုသော
ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လူသူကင်းမဲ့ နေတဲ့ ထိုင်ခုံများသို့ တစ်ခုံမှတစ်ခုံအပြေးအလွှားသွားရောက်ကာ မဲ
ပေးသည့် ခလုတ်များကိုနှိပ်ပြီး မဲပေးခဲ့ ကြလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်...
၎င်းတို့ အားပါးတစ်ရထောက်ခံခဲ့ တဲ့ ဥပဒေကတော့ ရုရှားသမ္မတ Dmitry Medvedev ကအဆိုပြုတင်
သွင်းခဲ့ တဲ့ ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
မေလ ၁၉ ရက်နေ့ ကကျင်းပခဲ့ တဲ့အစည်းအဝေးမှာ မဲပေးခဲ့ ကြတဲ့ ဗရုတ်သုက္ခအဖြစ်အပျက်ကို ရုရှား
ရုပ်သံလိုင်း Ren TV ကထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ ပြီး၊ ယူကျု ကနေပြန်လည်ကြည့် ရှုခဲ့ တဲ့ အကြိမ်ပေါင်း တစ်
သိန်းရှစ်သောင်းကျော် ရှိခဲ့ ပြီလို့ ဆိုပါတယ်...
" ခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းသန်မာတဲ့ အမတ်တစ်ဦးဆိုယင် သူတစ်ဦးတည်း မဲပေးတဲ့ ခလုတ် ၉ ခု ကိုနှိပ်ပြီး
မဲပေးခဲ့ ပါတယ်..." လို့ Ren TV သတင်းဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
အမတ်တွေအနေနဲ့ မဲပေးဖို့ စက္ကန့် ၂၀ မျှအချိန်ရခဲ့ ကြပါတယ် လို့ ရုရှားနိုင်ငံ Komsomolskaya Pravdaသတင်းက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင်ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေ State Duma လွှတ်တော်ထဲမှာတစ်နေကုန် ထိုင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သံသယရှိပေမယ့် ၈၈ ယောက်ပဲတက်တဲ့ အစည်းအဝေးက ထောက်ခံမဲ ၄၅၀ရတယ် ဆိုတာကတော့ လွန်လွန်းပါတယ်..." လို့ Komsomolskaya Pravda ကရေးသားဖော်ပြခဲ့ ပါ
Duma လွှတ်တော်ဒုတိယ သဘာပတိ Oleg Morozov ကိုယ်တိုင် မဲအရေအတွက် ရလာဒ်ဖြစ်တဲ့ မဲ
ပေးနိုင်ခွင့် ရှိသူ ၄၅၀ အထဲက ၄၄၉ မဲ ပေးခဲ့ ၊ ရခဲ့ ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ထွက်
ပေါ်လာတော့" တစ်ယောက်ယောက်တော့ ထွက်လာပြီးမဲပေးခဲ့ တာဖြစ်မယ်..." လို့ ဟာသလုပ်ကာ ပျက်ရယ်ပြုခဲ့ တာတွေ့ရပါတယ်...
လက်ရှိအာဏာရ ရုရှားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကတော့ အဆိုပါဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ဒေါသတစ်ကြီးဖြင့်
တုန့် ပြန်ခဲ့ ပါတယ်....
ပါတီထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူ Sergei Neveror ကတော့ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်ခဲ့ တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
များဟာပါတီရဲ့ (နောက်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့် ဆုံးရှုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်
လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" အခုလို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ မလာရောက်မှုတွေဟာ မကြာခဏဖြစ်ပွားလို့ အရှက်တစ်ကွဲ
ဖြစ်ရမှုတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ လိုပါတယ်..." လို့ Neverov ကပြောကြားခဲ့ ကြောင်း ITAR- TASS သတင်းဌာ
န ကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
" Duma လွှတ်တော်ဟာ အစည်းအဝေးမတက်ပဲ ကိုယ်ကျိူးရှာနေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေကို ဖယ်
ရှားဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ..." လို့ လည်း သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါ Duma လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ နာမည်ကျော်အဆိုတော်အနုပညာရှင်များ၊ အိုလံပစ်
အားကစားသမား Alinakabaveva ကဲ့ သို့ သော ယခင်က နာမည်ကျော်အားကစားသမားများ လည်းပါ
ထိုလွှတ်တော်ရဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန့် တဲ့ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ United Russia ရုရှား
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Boris Gryzlov ရဲ့ ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့Duma
လွှတ်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ အခြေအတင်ဆွေးနွေးဝေဖန်ရမည့် တိုက်ပွဲနေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး ဆို
တဲ့ စကားဖြင့် ပင် ထင်ရှားနေတာကို သိသာနိုင်ပါတယ်...( သိကြပေါ့ ....)
လွန်ခဲ့ တဲ့ ဧပြီလကလည်း သမ္မတ Medvedev က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်မှုနည်း
" ပါလီမန်မှာ ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုံး၊ ၁၅ ရာခိုင်နှုံး လောက်သာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်
တာကို တွေ့ ရလို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အံ့ အားသင့် ခဲ့ ရပါတယ်... အစည်းအဝေးကိုလာကြပါ...မလာ
တဲ့ သူတွေကိုတော့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေပြောင်းလဲပြုပြင်ပြီး တစ်ခြားကိုသွားခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်..." လို့ သူ
ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်......( လာလည်းဘာမှ မထူးတာလေ....)
" ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့Duma လွှတ်တော်မှာ ဒီလိုမျိူးပျက်ကွက်မှုတွေ ဖြစ်နေ
ကျဖြစ်ပါတယ်.. Duma ရဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်သက်တမ်းမှာလည်းဒီလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့ ပြီး၊ တစ်ချိန်လုံးလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်
နေခဲ့ မှာပါ..." လို့ နိုင်ငံရေးရာသတင်းဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Alexi Mukhin ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" Duma လွှတ်တော်အကြီးအကဲများဟာ အခုလိုလွှတ်တော် အမတ်များရဲ့ အမှန်တစ်ကယ်အစည်းအဝေး
မတက်ရောက်ပဲ လိမ်ညာပြီး မဲပေးနေမှုတွေကို အလွန်ပဲစိုးရိမ်ပူပန် နေကြပါတယ်...
Duma လွှတ်တော်ရဲ့ စည်းမျဉ်းအရ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ 
ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ခွင့် ကို တစ်ခြားကိုယ်စားလှယ်များကိုလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်...သို့ သော်လည်း အတားအဆီး၊အ
ထိန်းအကွပ်မရှိ အပြေးအလွှားဖြင့် မဲပေးခလုတ်များကိုလိုက်နှိပ်ပြီး မဲပေးနေကြတာကတော့ စည်းမျဉ်းချိူး
ဖောက်ရာရောက်ပါတယ်..." လို့Mukhin ကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအထိတော့ အဆိုပါသတင်းပေါက်ကြားမှုကို ရုရှားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက လွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတဲ့ 
Duma လွှတ်တော်ရဲ့ စည်းမျဉ်းကိုပြင်းထန်စွာချိူးဖောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ထက် ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆန်း
လွှတ်တော်ရဲ့ စည်းမျဉ်းထဲမှာ ဥပဒေပြုမှုများ အထမြောက်စေဖို့ မဲပေးသူ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အများစု
တက်ရောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြဌာန်းထားတာကြောင့် ယခုကဲ့ သို့ ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားပျက်
ကွက်မှုကြောင့် မဲပေးမှုဟာ တရားမ၀င်ဖြစ်တယ် လို့ ဝေဖန်သူများကပြောကြားခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
စည်းကမ်းပြည့် ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အဲဒါမျိူးထင်ပါရဲ့ ဗျာ...
ဒါကတော့ အဲဒီ နာမည်ကျော် ဗီဒီယိုကလစ်လေးပါ...
Russia’s oft-ridiculed parliament was hit byanew scandal on Wednesday after deputies were caught on video running from seat to seat pressing voting buttons for fellow MPs who did not bother to turn up.
The episode is the latest embarrassment for the Russian lower house of parliament, the State Duma, which often just performs the role ofarubberstamp and rarely blocks initiatives from the Kremlin.
The bill that they were voting on was proposed by President Dmitry Medvedev
Deputies have around 20 seconds to vote, allowing the machinations, Russia’s Komsomolskaya Pravda reported on Wednesday.
“Of course, we suspected that our people’s deputies do not sit around in the State Duma all day long, but come on, 88 out of 450 is too much,” Komsomolskaya Pravda wrote.
Deputy speaker at the Duma, Oleg Morozov, is shown joking as the voting result comes up on the screen: 449 out of 450 deputies have passed the bill.
“Someone must have stepped out,” he quipped.
Ruling party United Russia reacted furiously to the video, with top party official Sergei Neverov threatening that deputies who skip sessions risked losing the party’s nomination.
Its deputies include popular singers and former sports figures, including Olympic gymnast Alina Kabayeva.
"I am amazed myself by the picture in the parliament when only 10 to 15 per cent of the members are present,” Medvedev said. “Let them go to the sessions, and as for those who don’t go, let’s change the legislation, and let them go somewhere else,” he said.
“Unfortunately in Russia’s State Duma, this practice is common. In the Duma's fifth term, it has been used and is being used all the time" said Alexei Mukhin, director of the Centre for Political Information.
"The leadership of the State Duma is very concerned about the absence of deputies and this creates the illusion that the deputies are present and are voting."
Under Duma rules, absent deputies can pass their voting rights on to colleagues, but the uncontrolled buttonpressing is "of courseabreach of procedure," Mukhin said.
Critics said the abysmal turnout technically made the vote illegal since the rules of parliament itself stipulated thatamajority of MPs needed to be present for its activities to be legitimate.
Posted by Unknown | at 1:47 AM | 1 comments
Mayawati is worth Rs880m, officially
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်က ရူပီးသန်း ၈၈၀ ချမ်းသာ
အန်တီဝန်ကြီးချူပ်အတွက် ရူပီး ၁၈ သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ငွေစက္ကူတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ 
ပန်းကုံးကြီးနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ ကြတာပါ....( တစ်ထောင်တန်ရူပီငွေစက္ကူရွက်တွေနဲ့ လုပ်ထားတာပါတဲ့ ...)
MONEY REPLACES FLOWERS
Chief Minister Mayawati being presentedagarland of currency notes worth Rs 18 lakh by leaders at party headquarters in Lucknow.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဥတ္တာပရာဒေ့ ရ်ှပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ် မာယာဝတီ ဟာ ဗီဒန်ပါရီရှက် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပင်ထပ်မံ
အရွေးခံရန်လွန်ခဲ့ သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က၎င်း၏အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ ရာတွင် သူမ၏ ပိုင်ဆိုင်ချမ်းသာ
ကြွယ်ဝမှုကို အိန္ဒိယ ရူပီသန်း၈၈၀ ရှိသည်ဟု ကြေငြာဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ထိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ ၂၀၀၇ ခုက သူမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုထက် သန်း ၃၆၀ ကျော်များပြားတိုးတက်လာတာ
၂၀၀၇ ခုနှစ်က သူမ အထက်လွှတ်တော်တွင် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရစဉ်က သူမ၏ပိုင်ဆိုင်ချမ်းသာကြွယ်
၀မှုဟာ ရူပီး သန်း ၅၂၀ ရှိခဲ့ ပါတယ်လို့ မာယာဝတီက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ထိုစဉ်ကတည်းက သူမဟာ လစဉ် ရူပီးငွေ ၁၀ သန်းမျှ ၀င်ငွေရှိခဲ့ သည့် သ
သူမကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောကြားချက်အရ မာယာဝတီဟာ နယူးဒေလီမြို့ ရဲ့ ဆာဒါပတေးမာ့ ဂ် အရပ်မှာ
( အကျယ် စတုရန်း ပေ ၃၉၀၀၀ ) ရှိတဲ့ တစ်ဆက်တည်း မြေကွက်နှစ်ခုမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ရူပီး ၅၄၀.၉
သန်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘန်ဂလိုတစ်ခု လည်းပိုင်ဆိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
သူမဟာ မြို့ တော်မှာ အကျယ် ၃၄၁၁၂ စတုရန်းပေ ရှိပြီး ရူပီး ၁၅၀.၅ သန်း တန်တဲ့ အဆောက်အဦး
လည်း ဥက္ကလာအရပ်မှာ ( အိန္ဒိယ က ဥက္ကလာနော်...) ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကွန်နော့ တ် အရပ်မှာလည်း (အ ကျယ် ၃၆၂၈ စတုရန်းပေ ) ရူပီး ၂၀.၀၅ သန်း နှင့်( အကျယ် ၄၅၃၅ စတုရန်းပေ ) ရူပီး ၁၀.၂၇ သန်း
တန် မြေကွက်များလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသေးတယ်....
ထို့ အပြင် သူမပိုင်ဆိုင်သမျှတွေထဲမှာ လပ်ခနောင်းမြို့ ရဲ့ သာယာလှပပြီး တန်ဖိုးကြီးသည့် ကန်တိုမင် အ
ရပ်မှာလည်း ရူပီး ၁၀.၇၉ သန်းတန် စံအိမ်တစ်လုံး ပါဝင်ပါသေးတယ်...
မာယာဝတီမှာ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမှ မပိုင်ဆိုင်ပေမယ့် ၇ူပီး ၈.၆ သန်းဖိုးရှိ စိန် ၃၈၀ ကာရက်၊
၇ူပီး ၁.၉ သန်းဖိုးရှိ ရွှေ ၁ ကီလိုဂရမ်၊ ၇ူပီး ၄၄၀၀၀၀ တန် ငွေသားထမင်းစား ပန်းကန်ခွက်ယောက်တစ်စုံ
နှင့် ၇ူပီးသန်း ၁.၅ သန်း တန်ဖိုးရှိ နံရံဆေးရေးပန်းချီများလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
( ၀န်ကြီးချူပ်ဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်စရာမလိုဘူးနော်...အစိုးရကားကိုဘယ်သွားသွားအလကားစီး
သူမရဲ့ ဘဏ်ထဲမှာစုဆောင်းအပ်နှံပိုင်ဆိုင်မှုက ရူပီး ၁၁၀.၃၉ သန်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုပမာဏထဲမှာ ငွေသားက
ရူပီး ၁.၂၉ သန်းဖြစ်ပါတယ်...
ယခင်က ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ သည့် မာယာဝတီဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မေလမှာ သူမရဲ့ ဗဟုဂျန် ဆ
မက်ဂ်ျ ပါတီကိုဦးဆောင်ပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ မဲအများဆုံးဖြင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချူပ်ဖြစ်လာခဲ့ တာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြည်နယ်ရဲ့ အကြီးအကဲဝန်ကြီးချူပ် အမျိူး
သမီးအနေနဲ့ ဒီလောက်ချမ်းသာနေတာကတော့ အံ့ သြစရာပါပဲ....
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ( လူဦးရေ အများဆုံး ) ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်း၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းတွေမှာ အလုံးစုံပြီးပြည့် စုံသည့် ကောင်း
မွန်သော စနစ်ဟုပြောလို့ မရနိုင်ပေမယ့် အလွန်ပင် သိသာပွင့် လင်းပြီး၊ ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေအ နေနဲ့ ၎င်းတို့ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြည်သူတွေကို အသိပေးကြေငြာရလေ့ ရှိပါတယ်...
မကြာမီ လာမည်မျှော်ဆိုတဲ့ ပြဇတ်ကြီး တင်ဆက်မယ့် တိုင်းပြည်ကြီးမှာလည်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြ
မည့် လူကြီးမင်းများအနေနှင့်ထိုကဲ့ သို့ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို ရိုးရိုးသားသား အမှန်
အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်ကို ကြေငြာကြမှာလားဆိုတာတော့ ....
Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati on Wednesday filed her nomination papers seekingafresh term in the Vidhan Parishad, declaring assets worth Rs880 million,ahike of Rs360 million from 2007.
In the 2007 elections to the upper house, Mayawati said she had assets worth Rs520 million.
In other words, her wealth has gone up Rs10 million every month since then.
By her own admission, Mayawati ownsabungalow built on two adjoining plots (about 39,000 sq feet) on New Delhi’s upscale Sardar Patel Marg worth Rs540.9 million.
She also owns commercial property in the national capital — 34,112 sq feet worth Rs150.5 million in Okhla area and two spaces in Connaught Place, which measure 3,628 sq feet (Rs20.05 million) and 4,535 sq feet (Rs10.27 million).
Among her acquisitions wasamansion in Lucknow’s posh Cantonment area worth Rs10.79 million.
Mayawati does not ownasingle vehicle but has 380 carats of diamonds worth Rs8.6 million, over 1 kg of gold worth Rs1.9 million,asilver dinner set worth Rs440,000 and murals worth Rs1.5 million.
Her bank deposits total Rs110.39 million with Rs1.29 million in cash.
A former school teacher, Mayawati became the chief minister in May 2007 after leading her Bahujan Samaj Party (BSP) toamajority in the assembly elections. — IANS
တံတားပေါ်က ကားလမ်းဟာမြွေတစ်ကောင်လို တွန့် လိမ်နေလို့ 
Bouncing: The surface of the bridge can be seen snaking up and down during high winds at Volgograd
ရုရှားနိုင်ငံ၊ အရေးပေါ်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ၇ ကီလိုမီတာ ( ၄.၅ မိုင် ) ရှည်လျားသည့် ဗိုလ်ဂိုဂရက်
ဒေသမှ ဗိုလ်ဂါမြစ်ကူးတံတား တစ်စင်းဟာ တည်ဆောက်ဖွင့် လှစ်ပြီးကာမှ ယိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်ကာ တံတား
ပေါ်မှ ကားလမ်းဟာလှိုင်းတွန့် များလိုဖြစ်လာတာကြောင့် တံတားကိုပိတ်ခဲ့ လိုက်ရပါတယ်...
အဆိုပါတံတားကို လွန်ခဲ့ တဲ့ သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပိတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ဌာနမှ ၀န်ထမ်း
များဟာ အကယ်၍တံတားအခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာပါက အဆင်သင့် ဖြစ်နေစေရန် တံတားအနီးမှာ
အသင့် စောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ ကြပါတယ်...
တံတားကြီးတစ်ခုလုံး ယိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်ပြီး ကတ္တရာလမ်းတွေပါ ၃ ပေလောက် ရွေ့ ကုန်တယ်...
Alarming: The road surface moved more thanametre as the whole of the bridge wobbles
မြစ်အထက်ပိုင်းဒေသများဆီမှာ ဆီးနှင်းတွေအရည်ပျော်ပြီး မြစ်ရေတွေပိုမိုများပြားလာကာ မြစ်ရေစီးအား
ပြင်းထန်လာတာကြောင့် တံတားကိုထောက်မထားတဲ့ တိုင်ကို ယိုင်နဲ့ စေတာဖြစ်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် တံ
တားတစ်ခုလုံး ဟန်ချက်မညီဖြစ်စေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဗိုလ်ဂိုဂရက် မှာရှိတဲ့ အရေးပေါ်လုံခြုံရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးမှ မကြာမှီကာလအတွင်းတံ
တားကို ပြန်လည်ဖွင့် လှစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ သင့် မသင့် အတွက် အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
၄.၅ မိုင်ရှည်လျားကာ ဒေါ်လာ ၄၁၂ သန်း ကုန်ကျခဲ့ ပြီး ၁၃ နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ ပေမယ့် ...
အခုတော့ ဖွင့် လို့ မှ တစ်နှစ်မပြည့် သေးဘူး...ယိုင်နေပြီ....
Safety concerns: The 4.5 mile bridge over the River Volga in Russia cost £275million took 13 years to build
" တံတားကြီး ယိုင်နဲ့ လှုပ်ယမ်းနေတာဟာ အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
လောလောဆယ်အခြေအနေမှာ အေ၇းပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တွေဟာ ( တံတားအနီးတစ်ဝိုက် ) နေ
ရာတွေမှာ အသင့် ရှိနေကြပါတယ်..
ဗိုလ်ဂိုဂရက် အရေးပေါ်လုံခြုံရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ တံတားကြီးဆက်လက်အသုံးပြုဖို့ 
သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်... " လို့ အဆိုပါဒေသရဲ့ 
အရေးပေါ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဗာဒင်ဘာဆော့ ဗ် ကပြောကြားခဲ့ ပါ
လုံခြုံရေးအခြေအနေများကြောင့် တံတားကြီးကို ပိတ်ထားခဲ့ ရပါတယ်...
Resonance: Officials closed the bridge last week over safety concerns
ဥရောပတိုက်ရဲ့ အရှည်လျားဆုံးတံတားဖြစ်သည့် အဆိုပါတံတားဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပဲ တည်ဆောက်
ပြီးစီးခဲ့ ကာလွန်ခဲ့ သည့် အောက်တိုဘာလက ဖွင့် လှစ်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး တံတားတည်ဆောက်မှုအတွက်
ဒေါ်လာ ၄၁၂ သန်းကုန်ကျခဲ့ ပါတယ်...
ဆ၇ာတော်ဦးကောသလ္လ ( ဓမ္မစေတီ ) ရွတ်ပြသွားတာပါ...
" ဖွင့် ပွဲကြီးတွေ...ဖွင့် ပွဲကြီးတွေ...
ပုံများကို တော့ daily mail ကရယူတင်ပြပါတယ်...
The bridge, the longest in Europe, was completed last year and opened in October 2009. Its construction cost 275 pound sterling million (412 US million dollars).
Posted by Unknown | at 1:12 AM |4comments
တစ်နေ့ စီးကရက် အလိပ် ၄၀ သောက်ရမှကျေနပ်သည့် အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်....
၎င်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကစားစရာ ကားပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်နေသည့် အင်ဒီုနီးရှားနိုင်ငံ
မူဆီဘာညွာဆင် ဒေသမှ အသက် ၂ နှစ်ရှိ ကလေးငယ်...
သူ့ ရဲ့ ကားပေါ်မှာထိုင်ယင်း စီးကရက်ကိုရှိုက်နေတာများ တစ်ကယ့် အသက် လေးဆယ်ကျော်အရွယ်
သို့ သော် ...
မြင်ကွင်း၏ အဖြစ်မှန်ကား စိတ်ဆင်းရဲစရာ၊ စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စရာပင်...
အသက် ၂ နှစ်သာရှိသေးသည့် အာဒီရီဇဲ ရဲ့ ကျန်းမာရေးကတော့ တစ်နေ့ လျှင် စီးကရက် အလိပ် ၄၀
ကုန်အောင်သောက်၇မှကျေနပ်သည့် သူ့ အကျင့် ကြောင့် သူ့ ကိုယ်သူပင် မနည်းသယ်ဆောင်ကာ သွား
မပြေးနဲ့ !!!...ဒိုင်းညောင့် !!!...အဟွတ်!!!..အဟွတ်!!!...
တစ်နေ့ ကို စီးကရက်အလိပ်လေးဆယ်တဲ့ ဗျာ...
ကိုယ်အလေးချိန် ၅၅ ပေါင် ( ၄ စတုံ ) ရှိသည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ကလေးငယ် ဟာ သူ့ နှင့် ရွယ်တူ
ကလေးများနှင့် အတူပြေးလွှားဆော့ကစားနိုင်လောက်အောင်ပင် သက်လုံမကောင်းတော့ ပေ....
( သည်အတိုင်းသာဆက်သွားပါက )သူ့ ရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာလည်း အလျင်အမြန်ဆိုးရွားလာမှာအသေ
ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကလေးငယ်အနေဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်တာကို ဖြတ်ပြစ်နိုင်လျှင် ကား
အသစ်တစ်စီးပင် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းပြောကြားခဲ့ သော်လည်း သူဆေးလိပ်တောင်း
လို့ မရခဲ့ လျှင် အကြီးအကျယ် ဆူပူအော်ဟစ်ငိုယိုတတ်သောကြောင့် ထိုကလေး ဆေးလိပ်ပြတ်အောင်
၎င်း၏မိဘများအနေဖြင့် မတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ ကြရပါတယ်...
" သားလေးဟာလုံးဝကို စီးကရက်စွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်...သူတောင်းတဲ့ အခါတိုင်းစီးကရက်မ၇ယင် သူ
ဟာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးအသံကုန်အော်ဟစ်ငိုယိုကာ၊ နံရံကိုခေါင်းနဲ့ ဆောင့် ပါတယ်...ပြီးတော့ လည်း
သူက ( ဆေးလိပ်မသောက်ရယင် ) ခေါင်းမူးတယ်၊ နေမကောင်းဘူး လို့ ပြောပါတယ်..." လို့ အသက်
၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူ ဒိုင်ယာနာ ကပြောပြပါတယ်...
အာဒီ လေးဟာစီးကရက်ကို တံဆိပ်တစ်မျိူးတည်းသာသောက်လေ့ ရှိပြီး သူ့ ရဲ့ စီးကရက်ဖိုးကလည်း အင်
ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဆူမတ်တြာ ပြည်နယ်၊ မူဆီ ဘာညွာဆင် ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ ၎င်းရဲ့ မိဘများအ
တွက်တစ်နေ့ ကို ပေါင်စတာလင် ၃.၇၈ ( ဒေါ်လာ ၅.၆ ) ခန့် ကုန်ကျနေကြရပါတယ်...
သူကလည်း တံဆိပ်တစ်မျိူးတည်းကိုပဲ စွဲသောက်သတဲ့ ...
တစ်နေ့ ကို စီးကရက်ဖိုး ငါးဒေါ်လာလောက် ကုန်တယ်ဆိုပဲ
ယခုကဲ့ သို့ အခြေအနေမျိူးဖြစ်နေတာတောင်မှ ၎င်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ငါးစိမ်းရောင်း
သူ မိုဟာမက် က " ကျွန်တော့် အတွက်တော့ သားလေးဟာ အလွန်ပဲ ကျန်းမာနေပုံပေါက်နေပါတယ်...
ဘာမျှ ဒုက္ခဖြစ်တာ၊ ပြဿနာဖြစ်တာ မတွေ့ ရပါဘူး..." လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အာဒီ လေးရဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တာဟာ စိုးရိမ်စရာ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ အစည်းရဲ့ မှတ်တမ်းကိန်းဂဏာန်းများအရ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အသက် သုံးနှစ်မှ
ဆယ့် ငါးနှစ်အတွင်း ကလေးသူငယ်များ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုံးဟာ ဆေးလိပ်ကို စမ်းသပ်သောက်သုံးကြည့် 
လေ့ ရှိပြီး ၃.၂ ရာခိုင်နှုံးကတော့ စွဲစွဲလမ်းလမ်းသောက်သုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်...
အသက် ၅ နှစ်မှ ၉ နှစ်အတွင်းဆေးလိပ်သောက်သူနှုံးဟာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ၀.၄ ရာခိုင်နှုံးရှိခဲ့ ရာမှ
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၂.၈ ရာခိုင်နုံးအထိမြင့် တက်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အသက် လေးနှစ်အရွယ်ရှိ အင်ဒီိုနီးရှားမှ ကလေးငယ်တစ်ဦးဆေးလိပ်သောက်နေသည့် ဗီဒီယိုကလစ်
တစ်ခုလည်း လွန်ခဲ့ သည့် မတ်လ အတွင်းက ယူကျု တွင် တင်ထားခဲ့ ပြီး အပြင်းအထန် ပြစ်တင်ဝေ
ဖန်ခဲ့ မှုကြောင့် ထိုဆိုဒ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ ကြရပါတယ်...
ဖော်ပြထားခဲ့ တဲ့ သတင်းများအရ ဒီကလေးအခုလိုဆေးလိပ်သောက်တတ်တာဟာ သူ့ ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ
က အစလုပ်သင်ပေးခဲ့ တာကြောင့် လို့ ဆိုပါတယ်...
အစကတော့ အပျော်သဘောနဲ့ လုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ ဖျက်လို့ မရတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်အ
လက်ဦးဆရာမည်ထိုက်စွာ၊ ပုဗ္ဗာစရိယ၊ မိနှင့် ဘ ... ဆိုသလိုပင် ၎င်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကိုသာအပြစ်တင်ရ
ကလေးဒီလောက်တောင် တစ်နေ့ စီးကရက်အလိပ် ၄၀ သောက်နေတာတောင်ပြဿနာမရှိပါဘူးလုပ်
သူ့ ကိုသာအချူပ်ထဲဖမ်းထည့်ဖို့ ကောင်းတယ်...
သူ့ ရဲ့ မဆင်မခြင်လုပ်ခဲ့ မှုကြောင့် ကလေးဟာ သက်သက်မဲ့ သက်ဆိုးရှည်ရမှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး...
Posted by Unknown | at 3:02 PM |3comments
လမ်းဘေးဓါတ်တိုင်တွင် သံကြိုးဖြင့် ချည်ပြီးလေလံတင်ရောင်းချခြင်းခံရသည့် တရုတ်နိုင်ငံ
ခေတ်သစ် ကျွန်ဈေးရောင်းပွဲမှ သနားစရာကလေးငယ်...
အသက်ရှစ်နှစ်သာရှိသေးသည့် ကလေးငယ်ကို ၎င်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူက တစိမ်းတစ်ရံဆန်များ
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖခင်ဖြစ်သူအမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ၎င်းရဲ့ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ရှိသားဖြစ်သူကလေးငယ်
ကို လမ်းဘေးဓါတ်တိုင်တွင် သံကြိုးဖြင့် ချည်ပြီး ခေတ်သစ်ကျေးကျွန်ဈေးကွက်ကဲ့ သို့ လေလံတင်ပြီး
ရောင်းချခဲ့ ပြီး လာရောက်ဈေးပေးဝယ်ယူသူများကို ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်ကိုစွန့် လွှတ်
ပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ်...
သို့ သော် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အလယ်ပိုင်း၊ ၀ူဟန်းမြို့ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွင်လာရောက်
ဈေးပေးဝယ်ယူတွေက ကလေးငယ်အနေနဲ့ အစားအစာကို မည်မျှလောက်အနည်းငယ်ကျွေးရုံဖြင့် လုံ
လောက်ပြီလဲဟု မေးကြသည့် အချိန်တွင် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ ကြရသည့် လမ်းသွားလမ်းလာများက
လေလံပွဲထဲကို ၀င်ရောက်လာကြပြီး ကလေးငယ် ဖေး ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ထိုးကြိတ်တိုက်ခိုက်ကာလေလံ
ပွဲကို ဖျက်ဖြစ်စေခဲ့ ကြပါတယ်...
ဒီလိုအပြုအမူမျိူးကို ကြင်နာသနားတတ်သူ၊ လူစိတ်ရှိသူတွေက မခံစားနိုင်လို့ 
သနားစရာကောင်လေးဟာယခုအခါ ၎င်းတို့ ရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပြောကြား
ရာမှာ ကလေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ၎င်း သုံးနှစ်သားအရွယ်မှသေဆုံးခဲ့ ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူအနေနဲ့ ကလေးကို
ကြည့် ရှုစောင့် ရှောက်မွေးမြူဖို့ မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ၎င်းတို့ ကိုပြောခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" သူ့ မှာ အိမ်လည်းမရှိ၊ အလုပ်လည်းမရှိ၊ ငွေလည်းမရှိပါဘူး...သူဟာငွေမက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး...ကောင်
လေးအတွက် နေထိုင်နားခိုစရာအိမ်တစ်ခုသာ ရှာပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောကြား
ခဲ့ ကြောင်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးကဆိုပါတယ်...
( ဖခင်ဖြစ်သူ ) ယောင်ဆွေး က သူဟာ အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးငယ် ချန်ကျင်ဒန်း ကို၎င်းရဲ့ ဖ
ခင်ဖြစ်သူက ဆိုက်ကားနင်းနေချိန်နဲ့ မသန်မစွမ်းဖြစ်သူ မိခင်ဖြစ်သူက အမှိုက်ပုံမှာ ရှာဖွေအမှိုက်ကောက်
နေချိန်မှာ လမ်းဘေးဓါတ်တိုင်မှာသံကြိုးနဲ့ ချည်ထားတာကို သတင်းစာများမှာဖော်ပြခဲ့ လို့ အစိုးရက က
လေးငယ်ကိုထိန်းကျောင်းပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ တာကို ဖတ်ရှု၊ သိရှိခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
သူကလေးကိုလည်း ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုက်ကားထွက်နင်းနေခိုက်ဆိုယင် ဓါတ်တိုင်မှာ သံကြိုးနဲ့ ချည်
ထားရလို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ထိတ်လန့် အံ့ သြခဲ့ ကြရပါတယ်...
အခုတော့ အဆိုပါ ၂ နှစ်သားကလေး ကျင်းဒန် ဟာသူ့ ရဲ့ သတင်းကိုဖတ်ရှုပြီး ကြင်နာသနားတဲ့ စေတနာ
ရှင်တွေရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် မြို့ တော်ဘေကျင်း ကမူကြိုကျောင်းတစ်ခုမှာ ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ နေထိုင်
ထိုစဉ်တုံးက ကျင်းဒန် ကလေးကို လမ်းဘေးဓါတ်တိုင်မှာ သံကြိုးနဲ့ ချည်ပြီးသော့ခတ်ထားတဲ့ မြင်ကွင်း
ဓါတ်ပုံကိုသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ လို့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက လူတွေမှာထိတ်လန့် အံ့ သြခဲ့ ကြရပါ
၎င်းးရဲ့ အစ်မဖြစ်သူ ကျင်ဟုံကလေးကို သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ကစားနေစဉ် ပြန်ပေးဆွဲသူများက ဖမ်းဆီးခေါ်
ဆောင်သွားခဲ့ ပြီးနောက်မှာတော့ကျင်းဒန်ကလေးကို လမ်းဘေးမှာ သံကြိုးနဲ့ ချည်ပြီးသော့ခတ်ထားခဲ့ 
၎င်းတို့ အနေနဲ့ ကလေးငယ်ကိုထိန်းကျောင်းဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ ယခုလို ( သံကြိုးနဲ့ ချည်ရုံကလွဲ
ပြီး ) တစ်ခြားနည်းလမ်းမရှိခဲ့ ပါဘူးလို့ မိဘများကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လွန်ခဲ့ တဲ့ သီတင်းပါတ်ကပဲ အဆိုပါ ၀ူဟန်းမြို့ မှာပဲမြေအောက်တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ တစ်နှစ်နီးပါးမျှသံကြိုး
နဲ့ ချည်ပြီးသော့ခတ်ထားခြင်းခံခဲ့ ရတဲ့ အ၀တ်အစားပင်မရှိသည့် ကိုယ်ဗလာနှင့် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မိန်း
ကလေးနှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ကကယ်တင်ခဲ့ ရပါသေးတယ်...
ထိုမိန်းကလေးနှစ်ဦးက ၎င်းးတို့ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာလေးကို တယ်လီဗေးရှင်းအ
ပျက်တစ်ခုထဲမှာ ရအောင်ထည့် ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ ရှိသွားတဲ့ တယ်လီဗေးရှင်းပြင်သူရဲ့ အကြောင်း
ကြားမှုကြောင့် ၎င်းတို့ ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
" ကယ်ကြပါ !!! ကျွန်မ ကိုမြေအောက်တိုက်ခန်းမှာ ချူပ်နှောင်ထားတာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ ပါပြီ..."
အဆိုပါ စာရွက်မှာ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၁၆ နှစ် နှင့် ၁၉ နှစ်အသီးသီးရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးများဟာ စာထဲမှာ ၎င်းတို့ ရဲ့ မြေအောက်
အချူပ်ခန်းတည်နေရာပုံစံကြမ်းနှင့် တစ်ဦးသောမိန်းကလေး၏ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပါ ထည့် သွင်း
၎င်းတို့ ကိုဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ထားသူလို့ သံသယရှိသူ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကျန်းရှန်ဘောင် ကတော့
၎င်းတို့ နှင့် မပါတ်သက်သည့် မုဒိန်းမှုတစ်ခုဖြင့် အချူပ်ထဲရောက်နေသည်မှာ တစ်ပါတ်မျှရှိနေခဲ့ ပြီဖြစ်
သည်ဟု ဘီဘီစီ သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ကလေသူငယ်များပြန်ပေးဆွဲခြင်းဟာ တရုတ်ပြည်မှာ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပြီး ဓားစားခံကလေးတွေ
ဟာ အတင်းအဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းခံကြရခြင်း သို့ မဟုတ် ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများမှာ အတင်းအကြပ်စေခိုင်းခံ
တရုတ်နိုင်ငံမှာဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာကွာဟမှုဟာ ပိုမိုကြီးမား၊ များပြားလာနေပြီး ကျင့် ဝတ်သိက္ခာမရှိသည့် ရာ
ဇ၀တ်ကောင်များ( ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ ) ဟာကလေးသူငယ်များကိုပြန်ပေးဆွဲကြပြီး ပူပင်သောက
ရောက်နေကြရသည့် မိဘများထံမှ ပြန်ပေးဆွဲငွေများတောင်းယူသည် အထိကျူးလွန်လာခဲ့ ကြပါတယ်...
ကလေးငယ်များကို အလုပ်ကြမ်းသမားများအဖြစ်ခိုင်းစေရန်အဖြစ်လည်း ရောင်းစားတတ်ကြပါတယ်...
၂၀၀၇ ခုနှစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ တဲ့ ကလေးသူငယ်များနှင့် စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေသူ၊ စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်
များ ၅၀၀ ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး အုတ်ဖုတ်၊ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းသို့ ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြသည့် အဖြစ်
အပျက်ပေါ်ပေါက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင်ပင် ယခုကဲ့ သို့ ဆိုးရွား၊ယုတ်မာသည့် ကလေးသူ
ငယ်များအား ပြန်ပေးဆွဲ၊ ရောင်းစားခြင်းများ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိနေပါသေးတယ်...
အဲဒီလိုဆင်းရဲချမ်းသာတွေကွာဟမှုကြီးမားလာပြန်ယင် ကွန်မြူနစ်စနစ်ဟာ လည်းတစ်ချိန်မှာ တစ်ကျော့
ပြန်ခေါင်းထောင်လာနိုင်ပါတယ်...( ပုံစံအသစ်နဲ့ ပေါ့ လေ...)
Police - who now have the boy in care - say Yong told them the boy's mother had died three years ago and he could no longer afford to raise him.
Yong Tsui said he had read how another youngster, Cheng Jingdan, aged two, had been offered day care after being kept in chains while his father worked asarickshaw driver and his handicapped mother scavenged for rubbish.
But now Jingdan has becomeapupil atalocal nursery in the Chinese capital Beijing thanks to the generosity of those who read about his plight.
Shocking pictures of Jingdan padlocked toalamppost horrified people around the world.
Posted by Unknown | at 2:10 PM |2comments
Saudi woman beat up religious police officer who stopped her for walking withaman
ချစ်သူနဲ့ အတူလမ်းလျှောက်တာကို တားမြစ်တဲ့ ရဲကို ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်တဲ့ ဆော်ဒီ
မြင်ကွင်းကတော့ ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံရဲ့ အမျိူးသမီးလူ့ အခွင့် အရေးလှုပ်ရှားသူများနှစ်ပေါင်းများစွာ
မက်ခဲ့ ရတဲ့ အိပ်မက်ထဲကလိုပါပဲ...
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ ဘာသာရေးဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဟာ နိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်းမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ Al-Mubarraz
မြို့ ရဲ့ ပန်းခြံတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေးလျှောက်လှမ်းယင်း လက်မထပ်ထားရသေးတဲ့ စုံတွဲတွေ တ၇ား
မ၀င်တွေ့ ဆုံနေတာကြတာကို စူးစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ စဉ် ၎င်းအနေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဆန့် ကျင်တုန့် ပြန်မှုတွေ
တွေ့ ရလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားခဲ့ မှာမဟုတ်ပါဘူး...
ဒါပေမယ့် အသက် ၂၀ ပါတ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိစုံတွဲတစ်တွဲ ပန်းခြံထဲမှာ အတူလမ်းလျှောက်နေတာတွေ့ 
လို့ အနားကပ်သွားခဲ့ ချိန်မှာတော့ ၎င်းရဲ့ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးခဲ့ တဲ့ အဖြစ်နဲ့ ကြုံတွေ့ 
ဒေသခံတွေက Hai 'aလို့ ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိကြတဲ့အကျင့် စာရိတ္တမြင့် မားရေးနှင့်ဒုစရိုက်နှိမ်နင်းကာကွယ်
တားဆီးရေးအဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဟာ ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ လက်မထပ်ရသေးခင် အ
မျိူးသားများနှင့် အမျိူးသမီးများ အတူတစ်ကွရောနှောသွားလာတွေ့ ဆုံတာဟာ ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တာမို့အ
ဆိုပါစုံတွဲကို ၎င်းတို့ ရဲ့ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် ၎င်းတို့ နှစ်ဦး မည်သို့ ပါတ်သက်၊
ထိုသို့ မေးမြန်းနေစဉ်မှာပဲ လူငယ်အမျိူးသားဟာ ရုတ်တရက်လဲကျသွားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအခါအမျိူးသမီးဟာ ရဲတပ်သားကိုတိုက်ခိုက် ရန်ပြုခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...သူမဟာ ရဲတပ်သားကို
ထပ်ခါတလဲလဲ ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့ လို့ ၎င်းရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ အပြားမှာဒါဏ်ရာတွေရပြီး ဆေး
ရုံသို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့ လိုက်၇ပါတယ်...
" အမျိူးသမီးတစ်ဦးထံမှ ခုခံတွန်းလှန်တဲ့ အပြုအမူကိုတွေ့ မြင်ရတာဟာ အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးသက်
ရောက်စေပါတယ်...လူတွေဟာ အဲဒီဘာသာရေးရဲဆိုတာတွေကိုစိတ်ကုန်၊ မျက်မုန်းကျိူးနေကြတာပါ.."
လို့ ဆော်ဒီအမျိူးသမီးလူ့ အခွင့် အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Wajiha Al-Huwaidar ကပြောကြားခဲ့ ပါ
" ဒါဟာ အခုမှ အစပိုင်းပဲရှိသေးပြီး နောင်ကိုလည်းပဲ ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေပိုမိုများပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်...
သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာနက်တွေက လူတွေရဲ့မကျေနပ်မှု၊ ဒေါသတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသဖို့ စွမ်း
အားနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် တွေပေးခဲ့ ကြပါတယ်..." လို့ သူမကပြောခဲ့ ပါတယ်...
" Hai 'aတွေဟာပြည်သူ့ စစ်တွေလိုပါပဲ...အခုတော့သူတို့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် အင်
တာနက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့ ကြားသိနေကြရပါပြီ...ဒါကြောင့် မို့ လည်း သူတို့ ရဲ့ ဆိုးရွားယုတ်မာတဲ့ ဂုဏ်သ
တင်းတွေကို အမှန်အတိုင်းသိမြင်ကြရပြီး လူတွေကို ငုံ့ မခံပဲတုန့် ပြန်ဖို့ စွမ်းအားသတ္တိတွေ ဖြစ်စေတာပါ
့ပဲ..." လို့ သူမက ထပ်ပြီးပြောခဲ့ ပါတယ်...
ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာရဲအဖွဲ့ နှင့် အရှေ့ ပိုင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ တို့ ဟာ မည်သည့် 
ကြေငြာချက်၊ သတင်းမျှထုတ်ပြန်ခဲ့ ခြင်းမရှိသလို ထိုစံတွဲရဲ့ အမည်များနှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သည့် နေ့ ရက်များ
ကိုလည်းအများပြည်သူများသိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းမရှိခဲ့ ပါဘူး...
အကယ်၍ ထိုအမျိူးသမီးကိုသာ ရုံးတင်တရားစွဲခဲ့ လျှင် သူမဟာအစိုးရဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုရဲ့ တာ
၀န်ရှိသူတစ်ဦးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိခိုက်စော်ကားမှုနှင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒါဏ်အပြင် ကြိမ်ဒါဏ်ပါ
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ အမျိူးသမီးများဟာ ကားမောင်းခွင့် မရှိသလို ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် လည်း မိမိကစလို့ ကွာရှင်း
ခွင့် မရှိပါဘူး၊ သားသမီးများကိုလည်း ( ကွာရှင်းခဲ့ လျှင် ) အုပ်ထိန်းခွင့် မရှိပါဘူး...
ဆွေမျိူးအရင်းအချာ မတော်စပ်သူအမျိူးသားများနှင့် လည်း အတူသွားလာဆုံတွေ့ ခွင့် လည်းမရှိပါဘူး...
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်၊ အခုလောလောဆယ် မှာ ကျွန်တော်ဖတ်နေတာကလည်း ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင့် 
ဆွေတော်မျိူးတော် တွေထဲက မင်းသမီးတစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့ တာကိုပြန်လည်ရေးသားထားတဲ့ 
" PRINCESS " ပြန်လည်တင်ပြရေးသားသူ Jean Sasson ရဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်နေတာပါ...
အခါအခွင့် သင့် လျှင်တော့ အဲဒီစာအုပ်အကြောင်း၊ ဇတ်လမ်းလေးလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်...
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ ခံစားရချက်တွေဟာ ပြောပြလို့ မရနိုင်လောက်အောင်ဆိုးရွားလှပါ
For unknown reasons, the young man collapsed upon being questioned by the cop. The woman then allegedly laid into the religious policeman, punching him repeatedly, and leaving him to be taken to the hospital with bruises across his body and face.
“To see resistance fromawoman meansalot,” Wajiha Al-Huwaidar,aSaudi women’s rights activist, said. “People are fed up with these religious police, and now they have to pay the price for the humiliation they put people through for years and years.
This is just the beginning and there will be more resistance. The media and the Internet have given peoplealot of power and the freedom to express their anger,” she said. “The Hai’a are likeamilitia, but now whenever they do something it’s all over the Internet. This gives themahorrible reputation and gives people power to react.”
Neither the religious police nor the Eastern Province police has madeastatement on the incident, and both the names of the couple and the date of the incident have not been made public.
Should the woman be charged, she could facealengthy prison term and lashings for assaultingarepresentative ofagovernment institution. Saudi law does not permit women to be in public spaces withoutamale guardian.
Women are not allowed to drive, inherit, divorce or gain custody of children, and cannot socialize with unrelated men.
Posted by Unknown | at 3:02 AM |3comments
Labels: news: jpost.com
ဒူဘိုင်းက စတန့် ထွင်ကားမောင်းမှု....
ဒူဘိုင်းမှာ ဒီလိုစတန့် ထွင်ပြီးမောင်းကြတယ်...
ဒူဘိုင်၏ နာမည်ကျော်အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်သော ရှိတ်ဇာရက် လမ်းပေါ်တွင် စတန့် ထွင်ကာ ပုံမှန်မဟုတ်
သောစွန့် စားမှုမျိူးဖြင့် မောင်းနှင်သင့် ကားမောင်းသူများအား ကင်မရာများဖြင့်စောင့် ကြည့် ကာမှတ်တမ်း
တင်မည်ဖြစ်ပြီး တွေ့ ရှိပါက စုံစမ်းရှာဖွေပြီး အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည့် မော်
တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
မကြာသေးခင်က ဒူဘိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ လင်ခရုဆာ၊ ပါဂျဲရို ကားများကဲ့ သို့ (4wheel drive ) လို့ လူသိများတဲ့ ကားများကို ဘီးနှစ်ဘက်ပေါ်မှာသာတစ်စောင်းထောင်ပြီးမောင်းနေပုံနှင့် ကားကို
စက်ဝိုင်းပုံလှည့် ပါတ်ကွေ့ နေစဉ်မှာ ဘီးလေးခုစလုံးမှ မီးခိုးများထွက်လာစေတဲ့ ကားမောင်းနေသည်တို့ 
ကိုရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု အင်တာနက်မှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ပါတယ်...
" ဒီလိုစတန့် ထွင်တဲ့ အဖြစ်မျိူးဟာ ပြောရမယ်ဆိုယင် နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ လမ်းပေါ်မှာမြင်တွေ့ ရတာတော့ မ
ဟုတ်ပါဘူး..." လို့Emirates ယာဉ်မောင်းသင် ဌာနရဲ့ နေ့ စဉ်နည်းပညာစီမံခန့် ခွဲမှု အထွေထွေမန်နေ
ဂျာ ပီတာရစ်ချတ်ဆန် က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" အခုလိုမျိူးမောင်းနှင်တဲ့ ယာဉ်မောင်း မည်သူ့ ကိုမဆို စုံစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး အပြစ်ပေးသင့် ပါတယ် "
လို့ လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ ယာဉ်စည်းကမ်းကြီးကြပ်ရေးနှင့် ယာဉ်မောင်း သင်
ကြားရေးဌာနမှာ အမှုထမ်းခဲ့ တဲ့ ရစ်ချတ်ဆန်က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
Drivers caught on camera engaging in ‘stunt’ driving on Dubai’s Sheikh Zayed Road should be tracked down and punished,aleading driving expert has said.
A video has emerged, showing large 4x4 vehicles driving on two wheels and performing doughnut manoeuvres, which is whereacar circles around with smoke coming from all four tyres.
“That sort of thing is not an everyday occurrence out on the road, let’s be fair,” said Peter Richardson, the general manager in charge of technical operations at the Emirates Driving Institute.
“Those drivers, whoever they are, should be identified and should be punished for that behaviour,” added Richardson, who previously worked asapolice officer in the UK for 30 years and specialised in traffic patrol and driver training.
Posted by Unknown | at 2:46 AM |0comments
Labels: news : arabian business
Boy, 13, conquers Everest
ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး ဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်
သို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ သူ....
သို့ မဟုတ် လူငယ်များရဲ့ စံပြထိုက်သူလေး...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိကောင်လေးတစ်ဦးဟာ ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ ဧ၀
ရတ်တောင်ထိပ်ကို ရောက်ရှိခြေချနိုင်ခဲ့ တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးလူသားဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
တောင်တက်ခရီးကြမ်း သို့ စတင်ထွက်ခွာရာ ဟိုတယ်ရှေ့ တွင် အမှတ်တရ....
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ ဂျောဒန်ရိုမီရို ဟာကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးတောင်
ထွတ်ပေါ်ကနေ သူ့ ရဲ့ မိခင်ဆီကိုဖုံးဆက်ခဲ့ ပါတယ်...
" မေမေ... ကျွနတော် အခုကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာကနေ ဖုံးခေါ်နေတာပါ..." လို့ 
သူမရဲ့ သားကပြောကြားခဲ့ ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ လေးအိန်းဒရိတ် ကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဂျော်ဒန်၊ သူ့ ရဲ့ ဖခင်၊ မိထွေးဖြစ်သူတို့ ခတ္တမန္ဒူ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် လွန်ခဲ့ သည့် လက
သူဟာ ဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်ကို ၎င်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ၊ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အတူနေရည်းစား ( မိထွေးဖြစ်သူ ) အပါ
အ၀င် တောင်တက်လမ်းညွှန် အကူသုံးဦးတို့ နှင့် အတူတက်ရောက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိကောင်လေးဂျော်ဒန် ဟာ ကမ္ဘာ့ တိုက်ကြီး ၇ ခု အနက် ၆ ခုမှာရှိတဲ့ အမြင့် ဆုံး
သူဟာ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာပဲ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ကီလီမန်ဂျာရို တောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ 
ယခုအခါမှာတော့ သူ့ အနေနဲ့ အန္တာတိက တိုက်ရဲ့ ဗင်ဆင်မက်ဆစ်ဖ် တောင်ထွတ် ကိုသာတက်ရောက်
ဖို့ သာကျန်ပါတော့ တယ်...( ထိုတောင်ကိုတက်ပြီးလျှင်တော့ တိုက်ကြီး ၇ တိုက်က အမြင့် ဆုံးတောင်
သူတို့ တောင်တက်အဖွဲ့ ဟာ နီပေါ်နိုင်ငံမြို့ တော် ခတ္တမန္ဒူ မြို့ တော်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်း မှာရှိတဲ့ 
ဧ၀ရတ်တောင်ခြေစခန်းရှိရာကို လွန်ခဲ့ တဲ့ လ ကစတင်ထွက်ခွာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်မည့် သူတိုင်းဟာ အနည်းဆုံးအသက် ၁၆ နှစ်ပြည့် ပြီးဖြစ်ရမယ် လို့ 
နီပေါနိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံကတော့ မည်သည့် အသက်ကန့် သတ်ချက်မှ မထား
ပေပေါင်း ၂၉ , ၀၃၅ ပေမြင့် ပြီး စွန့်စားတက်ရောက်သူများစွာရဲ့ အသက်တွေစတေးခဲ့ရတာပေါ့ ...
လွယ်လွယ်နဲ့ တော့ မရနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုပါပဲ...
တစ်ချိူ့ တောင်တက်သမားများကတော့ အခုလိုအသက်ငယ်ရွယ်သည့် လူငယ်လေးကို စွန့် စားတက်
ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ တဲ့ အတွက် ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ ပေမယ့် ၎င်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်း
ကနေ ဧ၀၇တ်တောင်ထိပ်ကိုတက်ရတာဟာ ( နီပေါနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတက်ရတာထက် ) အန္တရယ်
ပိုနည်း ပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်....
ဂျော်ဒန်ဟာ ကံကောင်းစေတဲ့ အဆောင်လေးတွေလည်းသူနဲ့ တစ်ပါတည်းယူသွားခဲ့ ပါသေးတယ်တဲ့ ...
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကပေးလိုက်တဲ့ သားပိုက်ကောင်ရဲ့ ဝှေးစေ့ တစ်စုံလည်းအဲ
" ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ သားပိုက်ကောင်ရဲ့ ပစ္စည်းကအစွမ်းအထက်ဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်..." လို့ သူတို့ 
တောင်တက်အဖွဲ့ ရဲ့ ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် ဘေလီ ကဆိုပါတယ်...
ပေပေါင်း ၁၆ , ၀၂၄ ပေမြင့် တဲ့အိုရှန်နီးယား ရဲ့ အမြင့် ဆုံးတောင်ထွတ် ကာစတန့် ဇ် ပိရမစ်
တောင်ထိပ်မှာ ဂျော်ဒန်ဟာ သူ့ ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းအဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ယုန်ခြေထောက်ကို လည်းထား
ရစ်ခဲ့ ပြီး သူ့ ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ကံကောင်းခြင်းအ
ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့သစ်စေ့ အနည်းငယ်ကိုလည်းတောင်ထိပ်မှာ စိုက်ပျိူးခဲ့ ပါတယ် လို့ဘေလီ
အဲဒီနောက်တော့ မှ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုံးကိုအသုံးပြုပြီး သူ့ ရဲ့ မိခင်ဆီကိုဖုံးဆက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူလေးကလည်း အသက် ၂၂ နှစ်နဲ့ မကြာသေးခင်ကပဲဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်ရောက်ခဲ့ သူပေါ့ ....
ပြန်အဆင်းမှာ ကံကောင်းလို့ အသက်မသေခဲ့ တာဆိုပဲ...
သြော် လူချင်းတူပေမယ့် အသက်ရှူခြင်းကွာတယ်ဆိုတာ ဒါမျိူးပါပဲ...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတာချင်းအတူတူတောင် တစ်ယောက်သောကလေးမလေးက ဘ၀ ကိုအဖတ်ဆယ်
လို့ မရအောင် ရေစုန်မြော နေချိန်မှာ တစ်ယောက်သော ကောင်လေးကတော့ အရွယ်ရောက်ပြီး အတွေ့ 
အကြုံရှိပြီး သူများပင် အလွယ်တစ်ကူ မရရှိနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင် ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးတောင်
တွေကို တက်နေနိုင်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်...
လူငယ်၊ လူရွယ်တွေ အားကျအတုယူနိုင်ကြပါစေ.....
ဓါတ်ပုံများကို daily mail မှရယူပါတယ်..
A 13-year-old American boy has become the youngest person to reach the summit of Mount Everest.
Some mountaineers have criticised the Romero family for letting him attempt the feat but his father said the ascent from the Chinese side is less dangerous.
Jordan carriedanumber of good luck charms, includingapair of kangaroo testicles given to him byafriend who has cancer. “That’s the one that probably meant the most,” Bailey,
the team's spokesmansaid.
Posted by Unknown | at 1:20 AM |2comments
Labels: news: orange.co.uk/khaleej time
15-year-old had sex over 300 times
အသက် ၁၅ နှစ်သာ ရှိသေးသည့် ဗစ်တိုးရီးယား အမည်ရှိမိန်းကလေးက သူမဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာ
ကလေးလိုချင်ခဲ့ တာမို့ အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ လောက် ဟ၀ှာမပြုပဲ ဟ၀ှာပြုခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ...( တည့် တည့် 
ဘာသာပြန်ရယင်တော့ အကာအကွယ်မပါပဲ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ချစ်ခြင်းငယ်ပြိုင်ခဲ့ တယ်ပေါ့ ...)
" သမီးက အခုဆိုယင် ကိုးတန်းရောက်နေပါပြီ...ဒါကြောင့် သမီး ကလေးတစ်ယောက်လိုချင်နေတာကို
မတားကြပါနဲ့ တော့ ..." လို့ မိန်းမဆိုးလေး က အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်စကားပြောခန်းတစ်ခု
မှာ မေးမြန်းတင်ဆက်သူ မော်ရီ ကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ မိခင်ကိုယ်တိုင် သူမကို အမေဖြစ်သူရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တော်သလင်းပွဲ၊ ဆင်ကာ
နွှဲနေတာကို လက်ပူးလက်ကြပ် မိခဲ့ ပေမယ့် စွဲမက်ဖွယ် ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ မဒီကညာလေးကတော့ ဂရုမစိုက်
အားပဲ ချီလေတဲ့ ချီလေ၊ မောင်ကြီးတို့ ရေ ပါပဲတဲ့ ဗျာ...
သူမဟာ ယောကျာင်္းပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၅ ဦးနဲ့ ပန်းခြံထဲမှာ၊ ကုန်တိုက်တွေထဲမှာ၊ လှေကားထစ်တွေ
ပေါ်မှာ၊ ကစားကွင်းတွေထဲမှာ နဲ့ ကျောင်းထဲမှာတောင်မှ ချစ်ခရီးကြမ်း၊ ချစ်စခန်းတွေဖွင့် ခဲ့ ပါတယ်လို့ 
သူမဟာ နောင်ရ၇ှိမွေးဖွားလာမယ့် ကလေးအတွက် ကလေးအင်္ကျီလေးများ၊ ကစားစရာလေးများနဲ့ ချိူ
လိမ်လေးတွေတောင်မှ ၀ယ်ယူစုဆောင်းထားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ...
လူတွေက သူမရဲ့ အနာဂတ်စီမံကိန်းကိုဘယ်လိုပဲထင်ထင် သူမကတော့ ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပဲ ကျောင်းက
နေထွက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ပြည့် တန်ဆာလုပ်စားဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အမေရိကားရောက်နေတဲ့ကိုကြီးကျောက် တို့ကူညီလိုက်ကြပါဗျာ...
သူတို့ ဆီမှာတော့ နာမည်ကြီးမယ်၊ ပိုက်ဆံများများရမယ်ဆိုယင် ဘာမဆိုလုပ်ဝံ့ တဲ့ စိတ်ထားမျိူးတွေ
ဖြစ်လာနေတာ တွေ့ နေရပါတယ်...
အဲဒီကလေးမလေးပြောဆိုနေတာများ အန်ချင်စရာတောင်ကောင်းနေသေးတော့ တယ်...
ကလေးလိုချင်တာများ အတည်တစ်ကျ ယောကျာင်္းယူလိုက်ပေါ့ ....
အဲဒီလိုအမေမျိူးဆီကို ရောက်မိမယ့် ကလေးဘ၀ရှေ့ ရေးကတော့ ရင်လေးစရာပါပဲ...
သူကလေးနဲ့ ဗျူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်လေးလဲကြည့် နိုင်ပါတယ်...
15-year-old Victoria claims to have had unprotected sex over 300 times inabid to get pregnant.
"I'm in the ninth grade and you can't stop me from havingababy," the rowdy youth said on Maury, an American talk show.
Her mother, Vicki has caught her having sex in her bed three times, but the busty 15-year-old does not seem to care.
She even admits to have slept with at least 15 men at "the park, the mall, stairs, the playground" and even at school.
Victoria also hasacollection of baby clothes, toys and pacifiers for her future baby.
She says she does not care what people think of her and plans to venture into prostitution after she drops out of school.
Posted by Unknown | at 12:53 AM |6comments
Labels: news: youtube
40,000 prostitutes heading for the World Cup
ကမ္ဘာ့ ဖလားဆီသို့ ချီတက်လာကြလေပြီ....
၂၀၀၈ ဘေဂျင်း အိုလံပစ်ပွဲတော်အတွင်း အနှိပ်ခန်းများမှ စီးပွားရှာသည့် 
တရုတ်မိန်းကလေးများအား ဒုစရိုက်နိမ်နင်းရေးစီမံချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ ကြစဉ်...
A group of Chinese masseurs are led out ofamassage parlour in Beijing inacrackdown against vice activities ahead of the 2008 Beijing Olympic Games
ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားအရပ်ရပ်မှ ပြည့် တန်ဆာအနည်းဆုံး အယောက် ၄၀၀၀၀ ဟာ လာမည့် လတွင်
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲကာလလာရောက်ကြည့် ရှုအားပေး
ကြမည့် ပရိတ်သတ်များဖြင့် စီးပွားရှာရန်အတွက် တောင်အာဖ၇ိကနိုင်ငံသို့ လာရောက်နေကြပြီဖြစ်
အာဏာပိုင်များအနေနဲ့ အနည်းဆုံး လူဦးရေ ၅ သိန်းမျှသော နိုင်ငံတစ်ကာဘောလုံးပွဲပရိတ်သတ်များ
ကို ဖျော်ဖြေဖို့ အခုလို လိင်လုပ်သားများအလုံးအရင်းဖြင့် လာရောက်ကြလိမ့် မှာဖြစ်တယ်လို့ ကြိုတင်
ခန့် မှန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ Christian Science Monitor သတင်းရဲ့ အဆိုအ၇သိရပါတယ်...
ပြည့် တန်ဆန်အများစုကတော့ တောင်အာဖ၇ိကအနီးပတ်ဝန်းကျင်က ဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ သ်ည့ အိမ်နီးချင်းနိုင်
ထိုနိုင်ငံများတင်မက အလွန်ဝေးကွာသော တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံများမှအမျိူးသ
မီးပြည့် တန်ဆာများလည်း လာရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးကထုတ်ဖော်ပြော
ထိုအထဲက အမျိူးသမီးအများအပြားဟာ ( ၀င်ငွေကောင်းသည့် အလုပ်ရန်လိမ်ညာ၍ဖြစ်စေ၊ တရားမ၀င်
ခရီးသွားမှတ်တမ်း ပတ်စပို့ အတုများဖြင့် ဖြစ်စေ ) လူကုန်ကူးကာတင်ပို့ ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း လူ့ အခွင့် အ
ရေးလှုပ်ရှားသူများက သတိပေးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တည်းခိုခန်းများအနေဖြင့် ပြည့် တန်ဆာလုပ်ငန်းများ လက်သင့် မခံကြ၇န်လည်း ၎င်းတို့ ကတိုက်တွန်း
အလွန်ဆင်းရဲမွဲတေသည့် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံရဲ့ ဒေသများက အမျိူးသမီးတစ်ချိူ့ ဆိုယင် ၎င်းတို့ ရဲ့ ခင်ပွန်း
ယောကျာင်္းများကိုစွန့် ပစ်ထားခဲ့ ပြီး တောင်အာဖရိကကိုလာရောက်နေကြပါတယ်...
အခုဆိုယင် တောင်အာဖရိကဟိုတယ်တွေမှာ တစ်ယောက်ထဲတည်းခိုနေထိုင်ပြီး စီးပွားရှာဖို့ ( ခင်ပွန်း
ဖြစ်သူများနဲ့ ) ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုတွေ ( အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲမှုတွေ ) ဟာ အလျင်အမြန်ဖြစ်ပွားနေတယ်
လို့ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဒေသမှရွာသားတစ်ဦးကပြောကြောင်း Christian Science Monitor က
" ဒါပေမယ့် သူတို့ တစ်တွေသတိမထားမိကြတဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအချက်က အဲဒီကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံး
ပွဲပြီးသွားယင် သူတို့ ( အဲဒီအမျိူးသမီးတွေ ) ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမှာလဲဆိုတာပါပဲ..." လို့ သူကဆိုခဲ့
အခုလိုကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲတွေဟာ လိင်ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းအတွက်တော့ မထူးဆန်းလှပါဘူး...
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဂျာမနီမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲကာလတုံးကလည်း ပြည့် တန်
ဆာလုပ်ငန်းကို ဥပဒေအရ တရားဝင်ခွင့် ပြုထားတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံဟာ ပြည့် တန်ဆာပေါင်း ၄၀၀၀၀ ခန့် 
ပြည်ပမှ လာရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ လို့ လူ့ အခွင့် အရေးအဖွဲ့ များရဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်အများအပြားခံခဲ့ ရပါသေး
Human rights activists warn that many of the women have been trafficked.They have also urged hotels to shun the sex trade.In extremely poor parts of Zimbabwe, some women have left their husbands to travel to South Africa."Marriages are fast breaking up with women choosing to stay alone in South Africa's hotels and lodges,"avillager in southern Zimbabwe tells the Christian Science Monitor."But the most unfortunate part, is what are they going to do after the World Cup?"The event is no stranger to sex trade. The 2006 World Cup in Germany, where brothels and prostitution is legalised, brought on an influx of about 40,000 sex workers andalot of criticism from rights groups.
Posted by Unknown | at 12:35 AM |3comments
လေယာဉ်ပျံကိုမျက်ခွံဖြင့် ဆွဲနိုင်သည့် ကွန်ဖူးဆရာ
တရုတ်နိုင်ငံမှ သိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဟာ လေယဉ်ပျံအငယ်စားတစ်စင်းကို ၎င်းရဲ့ မျက်ခွံများတွင် ချိတ်ဖြင့် 
ချိတ်ကာ အကွာအဝေးငါးမီတာ ( ၁၆ ပေ ကျော် ) ရောက်အောင် ကြိုးဖြင့် ဆွဲပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျီလင် ပြည်နယ်၊ ချန်ချွန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲအဆောင်အဦမှာပြုလုပ်တဲ့ စတန့် ထွင်
စွန့် စားပြသမှုတစ်ခုမှာ အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိ ဒေါင်ချိန်ရှန်းက ထိုသို့ စွမ်းရည်ပြသခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ 
မြို့ တော်နေ့ စဉ်သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ယခုလို့ တန်တစ်ဝက်မျှလေးတဲ့ လေယာဉ်ကို ငါးမီတာအထိရောက်အောင်ဆွဲဖို့ သူ့ အနေနဲ့ တစ်မိနစ်
တောင်မကြာခဲ့ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
ဒေါင်ဟာ ကွန်ဖူးပညာကိုနှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးလေ့ ကျင့် နေခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ၎င်းရဲ့ ကွန်ဖူးစွမ်းရည်နှင့် ပါတ်
သက်ပြီး ဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...
" ကျွန်တော်ဟာ ကားတစ်စင်းကို မျက်ခွံတွေနဲ့ ချိတ်ပြီးဆွဲပြခဲ့ ပြီးပေမယ့် အခုလိုလေယာဉ်ပျံကိုဆွဲပြတာ
ကတော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူက ဆိုပါတယ်..
" အ၇ိုးသားဆုံးဝန်ခံ၇ယင် အခုဒါဟာ ကျွန်တော့် ရဲ့ အားအကုန်မသုံးရသေးပါဘူး...ဒီထက်သုံးဆမျှသော
အကွာအဝေးအထိ ဆွဲနိုင်လိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်ဟာဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအားကိုစုစည်းတည်ဆောက်ခဲ့ ပါတယ်...ဒါပေမယ့် သာ
မန်လူတွေအတွက်တော့ အခုလိုလုပ်တာဟာ အလွန်အန္တရယ်ကြီးတာမို့လူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော့် လို
( ကြိုးစားပြီးလိုက်လုပ်ယင် သူဒီလိုဆုတွေ၇ပြီးနာမည်ဒီလောက်ဘယ်ကြီးနိုင်မလဲဗျာ...)
ဒါပေမယ့် ကျည်ဆံတွေ၊ ဗုံးတွေ၊ ဒုံးကျည်တွေနဲ့ တွေ့ ယင်တော့ ကွန်ဖူးဆရာကြီးလည်းပြေးနိုင်မှလွတ်မှာ
Posted by Unknown | at 1:13 AM | 1 comments
Grandfather becomes sex addict after fall from tree
ရှစ်ဆယ်ကျော်မှာ ကံပေါ်တဲ့ အဖိုး...
မတော်တစ်ဆပြုတ်ကျမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီး ထူးဆန်းစွာပင် လူငယ်ကာလသားလေးများလို ငယ်မူငယ်
သွေးကြွကာ ဆောင်ကြာမြိုင်အချစ်ပွဲကိုသာ ဆင်နွှဲလိုတော့ သည့်အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ်ရှိ အဖိုးအို
တစ်ဦးကို ၎င်းရဲ့ မိသားစုက အိမ်မှာပဲ ( အကျယ်ချူပ်သဘောနှင့် ) ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ ရပါတယ်...
အင်အားချိနဲ့ နေပြီဖြစ်တဲ့ အဖိုးအို Angelo De Luca ဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘိုင်ယာစကာ အရပ်က ၎င်း
ရဲ့ မိသားစုနေအိမ်ရဲ့ မက်မန်းသီးပင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့ ပြီးလေးရက်ကြာမျှ သတိလစ်မေ့ မြောနေခဲ့ ပါ
ဒါပေမယ့် သူ့ ကို ခွဲစိတ်ကုသပြီးလို့ ပြန်လည်သတိရလာချိန်မှာတော့ ၎င်းတို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးလေးစားရတဲ့ 
မုဆိုးဖို ဖခင်ကြီးဟာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတွေလို ချစ်သွေးကြွနေတာကို မိသားစုဝင်များက
ထိတ်လန့် အံ့ သြဖွယ်ရာ တွေ့ ခဲ့ ကြရပါတော့ တယ်...
ရမ္မက်ဇောကြွနေတဲ့ အဖိုးအို Angelo ဟာ ၎င်းစုဆောင်းထားတဲ့ ( ဘဏ်ထဲကငွေ ) ပေါင်စတာလင် ၃၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ ) ကို နေထိုင်ရာမြို့ နယ်အတွင်းက ပြည့် တန်ဆာရုံမှာ မြေးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ 
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အစွဲကြီးစွဲကာ တစ်ချီတည်းနဲ့ ကုန်အောင်သုံးပစ်လိုက်ပါတော့ တယ်...
" ကျူပ်ရဲ့ ဇနီး လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်က ဆုံးသွားကတည်းက Leona လေး ( အဲဒီဇယားလေး ) ဟာ ကျူပ်အ
တွက်ဖော်မွန်ဖြစ်လာပါတယ်...သူလေးဟာ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေအပြောကောင်းရုံတင်မက ကျူပ်ကိုဘ၀
သစ်မှာ အားသစ်အင်သစ်၊ သတ္တိစွမ်းအားသစ်တွေပါ ပေးအပ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ တာပါ...သူလေးဟာ ကျူပ်အ
တွက်တော့ မိတ်ဆွေလည်းဟုတ်၊ အားကိုးယုံကြည်စိတ်ချရသူဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်..." လို့ အဖိုးအိုက
ဒါပေမယ့် တရားသူကြီးများက အဖိုးအိုဟာ အခုလိုမိန်းကလေးတွေနဲ့ သာပျော်ပါးဖို့ သာစိတ်စွဲကပ်နေတဲ့ 
အတွက် သူ့ ရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို သူကိုယ်တိုင်စီမံခန့် ခွဲနိုင်ဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ 
ပြီးနောက် သူ့ ရဲ့ သားဖြစ်သူ Daniele က ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အိမ်နှစ်လုံးနဲ့ ဘဏ်ထဲကငွေစာရင်းတွေကိုပါ ထိန်း
" အဲဒီမိန်းကလေးဟာ ကျွန်တော့် အဖေကို အချဉ်ဖမ်းပြီး အမဲဖျက်သလိုလုပ်နေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ 
သားဖြစ်သူက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအခါမှာ တော့ အဖိုးအိုရဲ့ မိသားစုဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာလစ်ဟင်းမှုဖြင့် 
" ကျွန်တော့် ဖခင်ဟာသစ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျခဲ့ လို့ နံရိုး ၇ ချောင်းကျိူးပြီး အဆုတ်ကိုပါထိုးဖောက်သွားခဲ့ 
ပါတယ်...ခွဲစိတ်ဆကုသဖို့ သူဟာရက်သတ္တပါတ် သုံးပါတ်တောင်စောင့် ဆိုင်းခဲ့ ရပါတယ်...သူဟာအပြင်း
အထန်နာကျင်ကိုက်ခဲနေခဲ့ ရလို့ သူနာပြုက နာကျင်ကိုက်ခဲတာသက်သာစေတဲ့ ဘိန်းပါဝင်တဲ့ မော်ဖင်း
ဆေးတွေ အလွန်အကျွံပေးခဲ့ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်... အဖေဟာ လေးရက်ကြာသတိကင်းလွတ်နေခဲ့ လို့ 
သူ့ ရဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ချွတ်ယွင်းပပျောက်သွားရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဦးနှောက်ထဲမှာသိတာဆိုလို့ မိန်းမတွေနဲ့ အိပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲ ရှိပါတော့ တယ်..." လို့ သူကထပ်ပြီး
သို့ သော် ဆေးရုံအကြီးအကဲကတော့ ၎င်းတို့ အနေနဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာတစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းမှုရှိခဲ့ တယ်
ဆိုတာကို ငြင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှုး Michele Morisoli က " ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ၎င်းတို့ အနေဲ့ သိသမျှ၊တတ်
သမျှ အကောင်းဆုံးကို သံသယကင်းစွာ၊ စိတ်ရှင်းစွာဖြင့် ပြုစုကုသဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်..."
လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဖိုးအတွက် ရှစ်ဆယ်ကျော်ရဲ့ နောက်ဆုံးမီးတောက်ပေါ့ ...
An 81-year-old granddad has been put under house arrest by his family afterabizarre accident turned him intoasex addict. Frail Angelo De Luca was inacoma for four days after he fell out ofaplum tree at the family home in Biasca, Switzerland. But coming round from an operation his family were horrified to watch their devoted widower dad turn intoarandy teenager again.
Sex mad Angelo blew £3,000 of his savings in one session atalocal brothel after falling head over heels forahooker young enough to be his granddaughter. "Since my wife diedayear ago, Leona has been there for me. It's not only that she's good in bed. She gives me new life force and courage. She is my friend, my only confidant," he said.
But his son Daniele has taken control of his dad's two houses and bank accounts after judges ruled that his sex addiction made him unfit to govern his own affairs. "That woman preyed upon my father like he wasaChristmas goose," he said. Now the family are suing the hospital for medical negligence. "My father broke seven ribs and his lungs were pierced in the fall. He had to wait for three weeks for surgery.
"He had severe pain and the nurse gave him morphine, maybe too much. My father fell intoacoma for four days. That must have wiped outabrain function. The one that inhibits the sex drive," he added. But hospital chiefs deny any medical blunder. Director Michele Morisoli said: "Our staff acted to the best of their knowledge and conscience."
Posted by Unknown | at 12:56 AM |3comments
Woman says dog can count to ten
တစ်ကနေ တစ်ဆယ် အထိ မှတ်မိသိရှိတဲ့ ခွေး...
ဆစ်ဒီနီ လို့ အမည်ရှိတဲ့ သြစတေးလျစပ်သိုးထိန်းခွေးမ တစ်ကောင်ဟာ တစ်ကနေတစ်ဆယ် အထိကိန်းကဏန်းများကိုနားလည်ပြီး ရေတွက်ပြနိုင် ( ဟောင်ပြနိုင် ) တယ်လို့ ခွေးပိုင်ရှင်ကပြောကြားခဲ့ 
ခွေးမလေးဟာ သာမန်အမိန့် စေခိုင်းချက်များဖြစ်တဲ့ထိုင်ခိုင်ခြင်း၊ လက်ပေးခြင်း၊ လှိမ့် ပြခြင်းစတာ
တွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာကို သင်ယူနားလည်ခဲ့ ပါတယ်...ပြီးယင်တော့ သူကြိုက်တဲ့ စပျစ်သီးခြောက်
ကို ဆုချရပါတယ် လို့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ မက်ဆင်း ဒေးဗီးစ် ကပြောပြပါတယ်...
သူမကို (ခွေးမလေးကို ) နံပါတ်ရွတ်ပြလိုက်တာနဲ့ ဆစ်ဒနီဟာ အဲဒီနံပါတ်အတိုင်းဟောင်ပြနိုင်ပါတယ်...
( ပိုင်ရှင် ) ဒေးဗီးစ်က ခွေးမလေး အသက် ၁၀ လသားအရွယ်မှာ အီရတ်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ သွား
မယ့် စစ်သားတစ်ယောက်ဆီကနေ ရခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် သူမရဲ့ ခွေးမှာထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ရပ်ရှိနေပြီဆိုတာ ဒေးဗီးစ် အနေနဲ့ သိလိုက်ရပါတယ်...
" ကျွန်မက ဒီခွေးဟာ နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတတ်လာပြန်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်... အခုဆိုသူမဟာ အကြိမ်
တွေကိုရေတွက်နိုင်ပါပြီ..." လို့ သူမကပြောခဲ့ ပါတယ်...
ခွေးမလေး ဆစ်ဒနီဟာ တစ်ကနေတစ်ဆယ်ကို အထက်အောက်ပြောင်းပြန်တင်မက၊ ဘယ်လိုမဆိုကြား
ဖောက်ပြီးတော့ လည်း မှတ်မိသိရှိကာ ဟောင်ပြနိုင်ပါတယ်...
ခွေးမလေးဟာ အလွန်တော်လွန်းလို့ တစ်ခါတစ်လေဆိုယင် သူမဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာ ဆစ်ဒ
နေ နားလည်ဖို့ စကားလုံးတွေကိုရွတ်ပြနေတယ်လို့ ဒေးဗီးစ် ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်....
ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုကြည့် ချင်ယင်တော့ ဒီ ကိုနှိပ်ပါ....
The owner of an Australian shepherd says that the dog, named Sydnee, can count to 10.
"I thought, 'That dog, she's just adding one finger, she's counting.' So apparently, she could count," she said. Sydnee can go up from one or down from 10, or in any other order.
Labels: news: wthitv.com
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဒတ်ခ်ျ (နယ်သာလန်) တွေ....
ဒတ်ခ်ျ ( နယ်သာလန် ) နိုင်ငံမှ လိင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအရောင်းဆိုင်တစ်ခုဟာ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘာသာ၊သာသနာပိုင်၊ တာဝန်ရှိသူတွေကိုလှောင်ပြောင်သရော်တဲ့ အနေနဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်း ကွန်ဒွန်
ဟု အမည်ပေးထားသည့် ကွန်ဒွန်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကိုယခုသီတင်းပါတ်အတွင်းအခမဲ့ ဖြန့် ဝေတော့ မှာဖြစ်
De Condoomfabriek လို့ အမည်ရှိတဲ့ကွန်ဒွန်ပြုလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ၎င်းတို့ အနေနဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူး
စက်တတ်သောရောဂါများအကြောင်းလူတွေပိုမိုသတိထားမိစေရန်၊ မလိုလားအပ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားနိုင်ခြင်း
နှင့် ရိုမန်ကက်သလစ်သာသနာပိုင်ရုံးစိုက်ရာ ဗာတီကန်ရဲ့ သန္ဓောတားခြင်းကို ဆန့် ကျင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို
လူအများသိစေလိုတာကြောင့် ယခုလိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အဆိုပါကွန်ဒွန်ကိုထည့် ထားတဲ့ အိတ်အဖုံးမှာ မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ကိုပယ်ဖျောက်ထားပေမယ့် လက်ရှိပုပ်ရ
ဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ငြင်းမရအောင်တူတဲ့ ပုံ၇ိပ်ပါရှိနေပါတယ်... ပြီးတော့ အဲဒီကွန်ဒွန်အိတ်မှာ
" ( ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ) သန္ဓေတားဆီးခြင်းမပြုလုပ်ရဘူး " " ကျွန်တော်တို့ ကတော့ လုပ်နိုင်ကြပါ
တယ်..." လို့ ဆိုတဲ့ စာသားတွေနဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်ကို အထက်အောက်ကွပ်ထားပါ
အခုလို ပုပ်ရဟန်းမင်း ကွန်ဒွန်ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုချက်ကြောင့် လွန်ခဲ့ တဲ့ လကပဲ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား
ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဗာတီကန်တို့ အကြား သံတမန်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ ပြီး နိုင်ငံခြားရေး
၀န်ကြီးရုံးဟာ၎င်းးရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်နီဒစ်အနေနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုလာရောက်
လည်ပတ်သည့် အခါ ပုပ်ရဟန်းမင်းတံဆိပ်ကွန်ဒွန်ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီသင့် တယ်လို့ အကြံပြုပြောဆို
ခဲ့ လို့ တောင်းပန်ခဲ့ ၇ပါတယ်.....
ဘယ်လိုပဲ သဘောထား၊ အယူအဆတွေမတူညီပါစေ၊ လူအများကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတစ်ခု
ရဲ့ အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်ကို အခုလိုစော်ကားတာကိုတော့ လက်မခံပါဘူး...
ကန့် ကွက်ရှုံ့ ချသင့် ပါတယ်...
ရုရှားက စည်းကမ်းပြည့် ဝသည့် ဒီမိုကရေစီ.... လူမ...
Russian authorities shut down wobbly bridge လေယ...
Chained toalamp post, the terrified Chinese boy ...
Saudi woman beat up religious police officer who s...
North Korean girls sold for RM5,000 each
Angry pig bites farmer's genitals and leaves him f...
Liars today, leaders tomorrow
Handless lorry driver sues police
Home is where your car breaks down
Compensation for wrongly jailed man
'Murderer' set free when victim returns home 13 ye...
Russian policeman kills himself scratching nose wi...
Chinese Stunt-man Walking on the Giant Knife Blade
လဲနေသူထူပေးပါ.. အားငယ်သူအားပေးပါ…. (နှင်းနဲ့မာယာ)...
Chinese tycoon gives fortune to charity
Gunman disguised in burka and sunglasses robs cash...
Patient lamped during operation
Indian pupils walk on fire, broken glass to boost ...
Gotcha! U.S. lawmaker caught looking at porn on Se...
Dead football player booked for diving
Britons in Dubai given dos and don'ts list by Embassy
Women are like....
The Chinese boy saved from certain death by his bi...
Taiwan woman 'embarrassed' to enter Time influenti...
Postman marries his pussy
Jesus flag banned for 'advertising Christianity'
Medical mystery: Living on yoga alone?